खिलराजले सूचना, ओलीले सुरक्षा दिने
काठमाडौं । डा.बाबुराम भट्टराईले त्रिभुवन विमान स्थलको सम्पूर्ण सूचनाको व्यवस्थापन गर्न भारतलाई दिन खोजेका थिए । पछि खिलराज रेग्मीको सरकार बनेपछि भारतसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको थियो ।
अहिले केपी ओलीको सरकारले भारतको समर्थन लिएर सत्ता टिकाउने दाउपेच लगाएर एयरपोर्टमा सौर्य उर्जा स्थापित गर्न भारतलाई गुहारेको र भारतीय सैनिक संलग्न भएको टोलीले एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतले सैनिक तैनाथ गर्ने समाचार आयो, यसबारेमा सरकारले के हो स्पष्ट पारेको छैन ।
न त, ओलीलाई फालेर सत्तामा जाने ५ दलीय मोर्चाले नै यसबारेमा बोलेका छन् । सौर्य उर्जा किन चाहियो ? सौर्य उर्जाको परामर्श दाता र व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई किन दिन लागेको हो ? यसबारेमा सबै तैं चूप मै चूप छन् ।
यो समाचारका बारेमा सरकारले, प्रतिपक्षीले जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । यो समाचार सत्य हो भने भारतले घुमाउरो मार्गबाट एयरपोर्टमा भारतीय सैनिक पोष्ट स्थापना गर्न सक्छ । त्यसै पनि भारतीय विमानमा यात्रा गर्नेले भारतीय सुरक्षा जाँच नगरी यात्रा गर्न पाउँदैनन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालको एयरपोर्टमा जाँच गर्ने ? यो आफैमा आश्चर्यपूर्ण घटना हो । तैपनि सरकार चलाउने र सरकार चलाउन जान आतूरहरू किन नेपालको सुरक्षा मामिलामा बोल्दैनन् ?